Xildhibaan Fiqi: Shacabka iyo Madaxda Puntland waxaan kala kulanay soo dhoweyn heer sarreysa iyo maamuus walaaltinimo – Kalfadhi
Xildhibaan Axmed Macalim Fiqi, oo katirsan Xubnaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya, sidoo kalane ka mid ah Xubnihii Baarlamaanka Soomaaliya ee ka qeyb galay caleema saarka Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa sheegay in soo dhoweyn wanaagsan iyo hab-maamuus ay kala kulmeyn shacabka iyo siyaasiinta Puntland maalmihii ay ku sugnaayeen Garowe.
Xildhibaan Fiqi ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook waxa uu ku sheegay inuu soo dhoweyn wanaagsan uu kala kulmay siyaasiinta, shacabka iyo xubno katirsan Xisbiga UPD ee ka howlgala degaanada Puntland sida uu ku sheegay qoraalkiisa. “Waxaan halkaan uga mahadcelinayaa madaxda Puntland oo uu ugu horreeyo Madaxweyne Siciid C/llaahi Deni, siyaasiyiintooda, aqoonyahanka, shacabka Puntland guud ahaan, gaar ahaan reer Garoowe”, ayuu yiri Xildhibaan Axmed Macalim Fiqi.
Axmed Macalim Fiqi ayaa sidoo kale u mahadceliyay Xubno katirsan Xisbiga UPD uu sheegay iney ka jiraan degaanada maamulka Puntland kuwaas oo soo dhoweyn wayn ugu sameeyay Puntland maalmihii ay ku sugnaayeen magaalada Garowe ee Xarunta maamulka Puntland. “Waxaan u mahadcelinayaa Xisbiga UPD Puntland ee ka kala yimid Boosaaso, Qardho, Gaalkacyo iyo kuwa ku sugnaa Garoowe iyo inta kale ee ka timid deegaamada kale ee Puntland”, ayuu hadalkiisa sii raaciyay Xildhibaan Fiqi oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Xildhibaan Fiqi ayaa hadalkiisa ku soo gaba-gabeeyay “Waxaan kala kulannay soo dhoweyn heer sarreysa, maamuus walaaltinimo, ixtiraam badan, iska xilsaarid weyn mudadii aan ku sugnayn Garowe”. Axmed Macalim Fiqi ayaa katirsanaa Xildhibaano ka mid Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya oo ku sugnaa magaalada Garowe ee Puntland kuwaas oo ka qeyb galay Munaasabadda caleema-saarka Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni.